Zvinoitwa Nevashanduri Pakushandura Mabhuku Mumitauro Inopfuura 750
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Vamwe vanoti hakuna basa rakaoma sezvakaita rekushandura.”—“The Cambridge Encyclopedia of Language.”
MABHUKU eZvapupu zvaJehovha asati atanga kushandurwa, panotanga panyatsorongwa, poitwa tsvakurudzo yakasimba uye zvadaro basa rekunyora rozoitwa. Panenge pachiitwa izvi, Dhipatimendi Rekunyora riri kumahofisi avo makuru kuNew York, rinoongorora zvose zvinenge zvanyorwa kuti ndezvechokwadi here uye kuti vanhu pavachaverenga vachanyatsozvinzwisisa here. *
Dhipatimendi Rekunyora rinozotumira mashoko acho kuvashanduri vakawanda vari pasi rose, uye vakawanda vavo vanogara munharaunda inotaurwa mutauro wavanenge vachishandura. Vakawanda vacho vanoshandura mabhuku vachiaisa mumutauro wavo. Vanofanira kunge vachinyatsonzwisisa Chirungu uye mutauro wavanozoshandurira.
Chati iri pano iri kuratidza zvinoitwa pakushandura magazini yeMukai! muchiSpanish
Vashanduri vekuSpain vanotumirwa magazini iyi iri mumutauro weChirungu kubva kumahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha ari kuUnited States
Mumwe nemumwe wavo anonyatsoverenga magazini yacho
Vasati vatanga kushandura, vanoungana kuti vakurukure zvavanenge vaverenga
Vashanduri vanova nechokwadi chekuti zvavari kushandura ndizvo here zviri kutaurwa muChirungu uye kuti ndiwo here mataurirwo azvinoitwa mumutauro wavo
Kana vapedza, vanotumira magazini yacho kuti inoprindwa, zvadaro magazini acho ozotumirwa kune dzimwe nyika
Vanhu vari pasi rose vanobatsirwa nemazano ari muBhaibheri pavanoaverenga mumutauro wavo
Vashanduri vanoshanda sei?
Geraint, mushanduri ari kuBritain, anoti: “Ndinoshanda nevamwe vashanduri, saka kugona kushanda nevamwe zvakanaka ndicho chinhu chinokosha. Kana tikawana panenge patiomera pakushandura, tinobatsirana kuona kuti tingapati kudii. Chatinonyanya kutarisa ndechokuti mutsara wacho wose uri kurevei, tobva tashandura izvozvo kwete kushandura shoko rimwe nerimwe. Tinogara tichifunga kuti ndiani ari kunyorerwa nyaya imwe neimwe yatiri kushandura.”
Chinangwa chako semushanduri ndechei?
“Chinangwa chedu ndechokuti munhu paanenge achiverenga aone sokuti nyaya yacho yakatanga kunyorwa mumutauro wake. Haifaniri kuonekwa sokuti yakashandurwa. Kuti tikwanise kuita izvi, tinoshandisa mashoko akajairana nevanhu. Izvi zvinoita kuti munhu anenge achiverenga anakidzwe zvekuti anoramba achiverenga sekunge kuti ari kudya zvokudya zvinonaka.”
Ndezvipi zvakanakira kugara kunotaurwa mutauro wacho?
“Kugara munzvimbo ine vanhu vanotaura mutauro wacho kunotibatsira kuti tishandure zvavanonyatsonzwa. Kuno kuWales kune vakawanda vanotaura chiWelsh, uye tinonzwa mutauro uyu uchishandiswa mazuva ose. Uye tinombokurukura nevanhu kuti tinzwe kana mamwe mashoko atinenge tichida kushandisa achinyatsonzwika uye achiita kuti mabhuku edu azofarirwa. Izvi zvinotibatsira kuti tishandure zviri kurehwa neChirungu.”
Basa renyu rakarongwa sei?
“Boka rimwe nerimwe revashanduri rinopiwa basa ravanonzi vashandure. Chekutanga, mumwe nemumwe muboka iri anoverenga nyaya yacho yeChirungu kuti anyatsonzwisisa kuti iri kutaura nezvei, yakanyorwa sei uye kuti yakanyorerwa ani. Tinozvibvunza kuti: ‘Nyaya iyi iri kutaura nezvechii uye chinangwa chayo ndechei? Chii chandichadzidza munyaya iyi?’ Kuziva izvi kunotibatsira patinenge tava kuzoshandura.
“Kana tapedza izvi tinobva taungana mumwe nomumwe achitaura zvaanzwisisa nezvenyaya yacho. Tinoita izvi kuti tione kuti tanyatsoinzwisisa here. Tinobva takurukura kuti tichazozvishandura sei mumutauro wedu. Chinangwa chedu ndechokuti zvichanzwiwa nemunhu anenge averenga nyaya yeChirungu zvifanane nezvichanzwiwawo nemunhu achaverenga nyaya yacho mumutauro watiri kushandura.”
Saka boka revashanduri rinoshanda sei?
“Chatinenge tichivavarira ndechekuti vanhu vachaverenga vabve vangonzwa zviri kurehwa pavanozviverenga kekutanga. Saka tinoverenga zvinonzwika kakati wandei zvatinenge tashandura.
“Munhu anenge achishandura anotaipa ndima imwe chete mumutauro wedu, tose tichiona zvaari kutaipa pamakombiyuta edu. Tinobva tatarisa kuti hapana zvawedzeredzwa here kana kuti zvasiyiwa. Tinotarisawo zviperengo uye kuti ndima yacho yanyorwa zvakanaka here mumutauro wedu. Kana tapedza, mumwe anobva azoverenga ndima yacho yose vamwe vakateerera. Kana paine paanenge atadza kunyatsoverenga, tinenge tava kuda kuona kuti chii chaita kuti atadze. Nyaya yacho yose painenge yashandurwa, mumwe anoiverenga vamwe vachinzwa uye vachimaka pasiri kunyatsonzwika kuti pazogadziriswa.”
Inga pane basa!
“Ndizvozvo! Patinozoenda kumba tinenge taneta. Saka patinozodzoka kubasa mangwana acho mangwanani, tinobva tasimudzira patakasiyira. Pashure pevhiki akati kuti, Dhipatimendi Rekunyora rinotitumira zvinenge zvagadziridzwa munyaya yeChirungu yatinenge tichishandura. Isuwo tinobva tagadziridza mumutauro wedu tichitevedzera zvaitwa kuChirungu, tozozviverenga zvekare kuti tinyatsoona kuti zviri kunzwika zvakanaka here.”
Makombiyuta anokubatsirai sei pabasa renyu?
“Makombiyuta anotibatsira, asi kuti pashandurwe zvinonzwisisika panotodiwa munhu kuti aite basa racho. Saka Zvapupu zvaJehovha zvakagadzira mapurogiramu epakombiyuta anotibatsira kuti basa redu rekushandura riite nyore. Tine purogiramu ine duramazwi rinochengeta mashoko atinogara tichishandisa. Patinenge taomerwa, tine imwe purogiramu inotibatsira kuti titsvake zvose zvakamboshandurwa mumutauro wedu toona kuti patiomera pakamboshandurwawo sei nevamwe.”
Basa renyu rinokunakidzai here?
“Tinoona basa redu sechipo chekuti tipe vanhu vose. Uye tinoda kuvapa chipo chakanaka. Kuziva kuti mumwe munhu anogona kuzobatsirwa nekuverenga imwe nyaya iri mumagazini kana kuti yatinozoisa paIndaneti kunoita kuti tifare chaizvo.”
Basa Rinobatsira Vanhu Kweupenyu Hwose
Pasi rose, mamiriyoni evanhu ari kubatsirwa nekuverenga mabhuku eZvapupu zvaJehovha mumutauro wavo. Mazano ari mumabhuku, mavhidhiyo, uye zvavanoisa panzvimbo yavo yepaIndaneti inonzi jw.org, anobva muBhaibheri. Uyewo, mubhuku iroro dzvene, Mwari, uyo ane zita rekuti Jehovha, anotiudza kuti anoda kuti mashoko ake anzwiwe nevanhu vanobva “kumarudzi ose nemadzinza nendimi [kana kuti mitauro] nevanhu.”—Zvakazarurwa 14:6. *
^ ndima 4 Mabhuku edu anotanga kunyorwa neChirungu.
^ ndima 25 Enda pawww.jw.org kuti uverenge zviri ipapo, unzwe zvakarekodhwa, uye uone mavhidhiyo mumutauro wako nemimwe mitauro yakawanda.
Nzvimbo yepamutemo yepaIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Mitauro inopfuura 700
Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi
Bhurocha rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha
Mitauro inopfuura 640
Magazini yakabudiswa neZvapupu zvaJehovha
Mitauro inopfuura 250
Mitauro inopfuura 100
“Ndinogara ndichirwara. Kunze kwezvandinoudzwa nachiremba, ndakabatsirwawo nemazano ari mumagazini yeMukai! iri mumutauro wangu wechiMalagasy. Yakandibatsira kuti ndisakurumidza kutsamwa. Yaivawo nenyaya dzaitaura nezvekuita maekisesaizi uye kudya zvine utano. * Ndakashandisa zvandaiverenga uye utano hwangu huri kuwedzera kuita nani.”—Ranaivoarisoa, Madagascar.
“Chiremba wangu anoshandisa nyaya dziri mumagazini yeMukai! yechiGujarati pakudzidzisa vamwe nezveutano. Akamboenda kune chimwe chikoro achibva anotaura nyaya yekushandisa madrugs uye kunwa doro zvakapfurikidza. Vana vepachikoro chacho vakati zvinhu zvaakataura izvi achitora muMukai!, zvakabatsira vanababa vavo kuti vasapedzera mari mudoro asi kuti vaishandise pakuchengeta vana vavo.”—Janet, India.
^ ndima 52 Mukai! haitauri kuti marapiro api akanaka kudarika mamwe kana kuti ndezvipi zvatinofanira kudya kana kusadya. Munhu anofanira kuzvisarudzira
Vamwe amai vari kuAngola vakaudza vanyori veMukai! kuti: “Mwana wangu ane makore 8 akashaya penzura dzake achibva abira vamwe vemukirasi make. Paakaona vhidhiyo inonzi Kuba Kwakaipa yechiPortuguese iri pajw.org, akabva audza baba vake kuti akanga abira vamwe kuchikoro. Akavakumbira kuti vaende naye kuchikoro kunokumbira ruregerero uye kuti anovaudza kuti nemhaka yei ava kudzorera penzura dzaakanga aba. Mudzidzisi wake akavabvumira kuti varatidze vana vemukirasi yacho vhidhiyo iyi. Pavakaiona, vana vakawanda vakataura kuti havachazobi zvekare.”
App Inobatsira Pakudzidzira Mumwe Mutauro!
Mugore ra2014, Zvapupu zvaJehovha zvakabudisa app isingatengeswi inonzi JW Language, inobatsira pakudzidzisa vanhu Bhaibheri mumitauro yakadai sechiBengali, chiChinese, Chirungu, chiFrench, chiGerman, chiHindi, chiIndonesian, chiItalian, chiJapanese, chiKorean, chiMyanmar, chiPortuguese, chiRussian, chiSpanish, chiSwahili, chiTagalog, chiThai, nechiTurkish. Kuti uzive zvakawanda nezveapp iyi, enda pajw.org wotsvaga pakanzi JW Language.